musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Myanmar kushanya - dambudziko retsika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Myanmar Breaking Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Kukwidziridzwa kwekushanya kune chero basa mukugadzirisa matambudziko akaoma echitendero, ezvematongerwo enyika, ehupfumi pamwe nehupfumi sezvazviri kuitwa nevanhu veRohingya nezviremera zveMyanmar?
Ko kushanya kunogona kupa mhinduro dzekugara kwenguva refu kwemazana ezviuru evapoteri veRohingya vechiMuslim vanoyambuka muganho weMyanmar kuenda kuBangladesh?
Handitendi. Zvakare maererano nekutepfenyurwa kwenhau, ndinotenda kuti ese mafambiro enhau (zvinopesana nevazhinji venhau) anokurudzira kushanya kunopa kuenderera, kunodonhedza kuyerera kwemari kuvanhu, kunyanya varombo.
Iyo nzanga yekufambisa midhiya inoda kudzora rutsigiro rwavo rwemari iyi yemari?
Mhinduro yangu HERE, ini ndoda kutsigira uye nekuisimudzira. Ehezve ndinonetsekana kuti vazhinji vakatamiswa uye ndinovimba mamiriro acho achagadziriswa munguva pfupi iri kutevera. Ini ndinotenda zvakafanana kuti nekusatsigira kushanya uye mari yainopa, haisiyo mhinduro.
Nzvimbo dzekare dzaBagan
Kuchengetedzeka kwevashanyi muMyanmar hakukanganisike sezvo dambudziko revapoteri riri munzvimbo iri kure pedyo nemuganhu weBangladesh, iyo yagara iri mirefu kune vashanyi.
Maputi ari kutengeswa pamusika weko padyo neAnanda Tembere muBagan
Kushanyira Myanmar ndicho chinhu chaicho chekuita sezvo zvichibatsira vanhu kutenderera nyika kubva chero rudzi kana chitendero.
Munyika zhinji isu tine nyaya dzakafanana kuburikidza nekusawirirana pakati pemapoka ezvitendero akasiyana, kazhinji munzvimbo dzemuganhu.
SaMyanmar, ndinotenda zvakasimba kuti kushanya hakuna nzvimbo yekutamba mukugadzirisa nyaya idzi. Vashanyi vanowanzoodzwa mwoyo kuenda kunzvimbo idzi. Nekudaro izvo hazvimise vashanyi kunakidzwa nemazororo akanaka. Kugadzirisa nyaya idzi kunotora mhinduro yezvematongerwo enyika.
Ndakashanyira Myanmar pazviitiko zvakawanda. Munguva pfupi yapfuura ndakashanyira kaviri; muna Nyamavhuvhu na Gumiguru gore rino.
Iyo inoshamisa Dombo reGoridhe muMON State
Kushanya kwangu muna Nyamavhuvhu kwaive kushanya kwega kwega neboka reshamwari gumi dzeThai. Iri boka rainyanya kufarira, pamusoro pemazuva matatu ekushanya, mukuita kugona; kudya nekufamba kuenda kune inozivikanwa Dombo reGoridhe paGomo Kyaiktiyo (Kyite Htee Yoe). Imwe yenzvimbo nhatu dzinonyanya kukosha dzechitendero muMyanmar.
Kushanya kwangu muna Gumiguru kwaive kuongorora zviri kuitika muMyanmar maererano nezve kushanya. Ndakapedza svondo ndichifamba nyika ndichitungamirirwa neMyanmar Tourism Marketing (MTM).
Iwo mafambiro ePaung Daw Oo paInle Lake
Zvakanyanya kukosha pakushanya uku kushanya kwedu kuInle Lake kunoona mutambo wakanaka wePaung Daw Oo uye nhangemutange yegumbo-rimwe.
Zviuru zvevashanyi nevagari vemunharaunda vanoungana kuti vaone kumhanya
Mukati meshanyo dzangu mbiri dzekupedzisira, takangoona nyemwerero inodziya inofadza uye kugamuchirwa kunoshamisa. Hapana pakamboitika kuchengetedzeka kwakambonetsa. Hupenyu hwaive hwanyanya kutakura semazuva ese.
Vabati vehove vari muInle Lake vanofunga nezvevatori vemifananidzo
Myanmar iri kuenda mumwaka wayo wepamusoro uye ichokwadi inguva huru yekushanyira nyika. Ndingakurudzira zvikuru kuti udaro.
Ini ndakanyatsogadzikana senhengo yenharaunda yepasi rese inofamba yekuenderera mberi nekushanyira Myanmar uye nekupa hupfumi nemari yekushanya pamwe nekukudza zviitiko zvangu zvekufamba. Nezve iwo mubvunzo wedambudziko retsika (kutsigira kushanya kweMyanmar), mhinduro yangu iri nyore - hongu.
Chirungu akaberekerwa Andrew J Wood, anoshanda akazvimirira pakufamba munyori uye kune mazhinji ebasa rake nyanzvi hotera. Andrew ane makore anopfuura makumi matatu nemashanu ekugamuchira vaeni uye ruzivo rwekufamba. Iye inhengo yeSkal uye director weWDA Travel Co Ltd uye nerutivi rwayo, Thailand neKugadzira (mafambiro / mafambiro / MISI). Iye akapedza kudzidza paNapier University, Edinburgh. Andrew zvakare aimbove nhengo ye Executive Executive yeSkal International (SI), Mutungamiri weNational SI THAILAND, Club Mutungamiri weSI BANGKOK uye parizvino ari SI AA A.VP Southeast Asia uye Director wePublic Relations, Skal International Bangkok. Iye anogara ari mudzidzisi wevashanyi kumaYunivhesiti akasiyana siyana muThailand anosanganisira Assumption University's Hospitality School uye Japan Hotel Chikoro muTokyo.